Ajaaniibta dalka ku soo badaneysa iyo saameeynta suugaanta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ajaaniibta dalka ku soo badaneysa iyo saameeynta suugaanta
La daabacay tisdag 29 december 2015 kl 16.41
In suugaan dheeri ah lagu helo luuqaddaha ajaaniibta
Margaretha Lindh, madaxa madxafka caalamiga Stockholm.
Maadaama ey kor u sii kaceyaan ajaaniibta dalka timaada ayaa dhanka kale waxaa kor u kacey baahid loo qabo suugaanta ku qoran luuqadaha kala ee ajaaniibta dalka ku sugan ee laga helo madxafyada buugagta ee dalka. Iyadoona iminka uu madxafka caalamigu uu helay miisaaniyad dheeri ah ee lagu maareeyo suugaanta ku qoran luuqadda carabiga:
- Aad iyo aad ayaan ugu farax-sanahey in aannu heley miisaaniyad 100 000 oo koron oo dheeri ah, mar haddii baahida suugaantu soo badaneyso. Waa arrin aad u wanaag-san haddaan hadalka soo gaabiyo.
- Xaqiiqdii iney dalka ku soo kordheyaan soo-galootigu waa mid siyaabo kala duwan looga arki karo bulshada dhexdeeda, iyo weliba baahida ballaaran ee laga dareemo madxafyada buugagta gaar ahaan marka laga hadleyo suugaanta luuqadda carabiga.
Si haddaba baahidaa looga hor-tago ayuu madxafka boqorku ugu deeqay madxafka buugagta caalamiga ee magaalada Stockholm, ahna madxaf qaran ee laga helo buugagta ku qoran luuqadaha ajaaniibta miisaaniyad dheeri ah iyo sidii loogu maareeyn lahaa kor-dhinta suugaanta ku qoran luuqadda carabiga.
Margareta Lindh, ahna madaxa madxafka caalamiga ayaa sheegtay in helista suugaanta ku qoran luuqadda hooyo ay tahay hab lagu dareemo soo dhoweeyn iyo ammaan, kolka uu shakhsigu yimaada goob cusub:
- Aad iyo aad ayay muhiim u tahay in la helo suugaan ku qoran luuqadda hooyo, weliba kolka kolka aad dal ku cusub tahay. Halka ey madxafyada buugagtuna yihiin goob cid walba u furan, middaasina oo ah arrin muhiimad ku fadhida, sida aan qabo.
Suugaanta laga hadleyo ayaa ah suugaanta noocyadeeda kala duwan hadday noqon lahayd suugaanta dhallaanka, dhallin-yarada, buugagta sheekooyinka, kuwa xaqiiqda iyo weliba buugagta codka ah. Waxaannuna isku deyi doonnaa sidii aannu xoogga u saari laheyn suugaanta ku qoran luuqadda carabiga eyna qoreen qoraayo carbeed, waayo madxafka caalamigu wuxuu xiriir ballaaran la leeyahay qoraayada carbeed iyo shirkadaha buugagta soo sooraa ee Qaahira iyo Bayruud.
Hase yeeshee inkastoo dallabaadyadii la direy, haddana muddo ayey qaadan doontaa inta buugagtaa laga heli doono qaanadaha madxafka, sida ay sheegtay madaxa madxafka caalamiga ee Stockholm Margaretha Lindh.
- Wakhti ayaa u dhexeeya kolka dalabka la sameeyo illaa iyo inta buugga la soo dhigeyo qaanadaha madxafka, inkastoo aannu ku dadaaleeyno sida ugu dhakhsiyaha badan in aannu u soo dhigno, tallaabadanina oo yeelan doonta saameeyn ballaaran, sida ay sheegtay Margaretha Lindh.